Maka: iziqubu | Martech Zone
Ungabi yiPunk, yiba yiHunk futhi Chunk Okuqukethwe Kwakho
ISonto, Ephreli 22, 2007 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 20, 2016 Douglas Karr
Lokho kunuka, uxolo! Sethemba ukuthi ikunakile. UDan Zarrella uneposi elihle kakhulu lokunqamula okuqukethwe kwakho. Ngiphinda ezinye izeluleko zakhe bese ngifaka okuncane kwami. I-Chunkless: Kube nenqwaba yocwaningo ngokuziphatha kwabavakashi bewebhu nokuthi bafunda kanjani futhi badlulise ama-athikili namakhasi kusiphequluli sewebhu. Indlela ejwayelekile yezivakashi zewebhu ukufunda idatha noma izihloko ezisemachunwini kunokufunda